Sehatra Nanampy Ireo Mpifindra-monina An’arivony Hifandray Amin’ny Fianakaviany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Mey 2017 11:55 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Français, Swahili, Italiano, Español, 日本語, English
Sarin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana ao Rwanda. Sary avy amin'i ©Elisa Finocchiaro Creative Commons – license – BY
Eo amin'ny 65 tapitrisa eo ireo olona manerantany ankehitriny izay nandositra ny tanindrazan'izy ireo. Nilaza ny Vaomiera Ambony Misahana ny Mpitsoa-ponenana ao amin'ny Firenena Mikambana (UNHCR) fa ity no tarehimarika betsaka indrindra hatramin'ny ady lehibe faharoa. Mampalahelo tokoa izany, kanefa vao mainka mampivarahontsana ny mahita fa maro amin'ireo vahoaka ireo no tsy afa-nifandray intsony amin'ny fianakaviany.
Saingy mety ho an-dalana ny fanampiana
Nahita vahaolana amin'ity fanamby ity ireo mpirahalahy Danoà roa sady mpandraharaha ara-tsosialy, David sy Christopher Mikkelsen. Ny sehatr'izy ireo, REFUNITE, (Mpitsoa-ponenana Miray), dia ahafahan'ireo mpifindramonina antsasaky ny tapitrisa manerantany hamerina indray ny fifandraisana very tamin'ny fianakavian'izy ireo. Ity ny lahatsary mamintina ny fitsipiky ny tetikasa:
Tany am-piandohan'ity taona ity, notendren'ny Forum Ara-toekarena Manerantany (WEF) ho mpandraharaha ara-tsosialin'ny taona ireo mpirahalahy Mikkelsen noho ny ezaka nataon'izy ireo. Tamin'ny fanambarana iray, namoaka ity fanazavana ity mikasika ny fomba fiasan'ny sehatra ny tranonkalan'izy ireo:
Ny sehatra mampifandray indray ny fianakaviana dia tsy azo hidirana amin'ny finday tsotra amin'ny alalan'ny somaiso, USSD, habaka na antso an-tariby maimaim-poana. Na izany mpitsoa-ponenana Afghana ao Pakistan na olona nafindra toerana tany Iraka, na iza na iza mila izany dia afaka mikaroka, mifandray indray sy miresaka amin'ireo havany tsy nihaonana hatry ny ela – na dia tsy afaka mandoa vola handoavana ny lahatahiry finday aza izy ireo.
Na dia eo aza ny fahafaham-po tamin'ny fitondrana ireo olona miisa 500.000 tao amin'ny sehatra REFUNITE ary nanomboka izany tamin'ny fitsangatsanganana hifandraisan'izy ireo tamin'ny fianakaviany, tsy nanadino ny dikan'ny sehatra ireo mpirahalahy:
Na dia zava-bita tsara marihana aza ity, misy ny fampahatsiahivana kely fa misy ireo olona tsy afaka mahita ny zanany, mpiray tampo, ray aman-dreny sy ny namany. Indrisy anefa, fa tsy mitsahatra hatreo izany: mampiantrano olona nafindra toerana marobe tsy araka ny hitantsika nanomboka tamin'ny ady lehibe faharoa izao tontolo izao! Ary raha i Syria no tompon'andraikitra tamin'ny fahamaroan'isan'ny olom-pireneny nandositra ny firenena sy mahazo ny ankamaroan'ny lohatenim-baovao, indrisy fa mbola maro ireo krizy hafa mirongatra tanteraka, ary vaovao marobe hafa no ahiana hipoaka amin'ny fotoana rehetra. Ny REFUNITE dia hanohy hiasa mafy mba hanampy ny olona rehetra mitady ny havan-tiany hifandray amin'izy ireo indray. Ny tanjonay dia hanohy hanangana ny sehatray mba hanome trano nomerika sy foto-drafitrasa nomerika ho an'ireo olona an-tapitrisany nafindra toerana sy mbola ho afindra atsy ho atsy.
Ny REFUNITE, izay niforona tao Kenya dia fiarahamiasa eo amin-dry Ericsson, ny Fikambanana IKEA, ny orinasan'ny finday Zain sy Vodacom ary ny Free Basics an'ny Facebook
Nanomboka tamin'ny volana Septambra 2010 ny tetikasa izay fiarahamiasa amin'ny Vaomiera Ambony ny Firenena Mikambana Misahana ny Mpitsoa-ponenana (UNHCR) sy ny mpandraharaha finday MTN, izay toy ny drafitra fitaratra ao avaratr'i Oganda.
Hatreto, eo amin'ny hafatra 11 tapitrisa eo no nalefa tamin'ny alalan'ny sehatra ary efa nahavita fikarohana maherin'ny 9 tapitrisa, miaraka amin'ny fisoratana anarana 600.000 manerana izao tontolo izao. Tamin'ny faran'ny taona 2017, mikendry hamantatra ny fianakavian'ireo olona nafindra monina miisa 1 tapitrisa ny REFUNITE.